Va Chiwenga Vanoti Mauto Ari Kuita Zviri paMutemo
Mashoko ava chiwenga anotevera mashoko aVaTsvangirai, ekuti mauto emunyika ndiwo ari kutadzisa kuti nyika kuti ifambire mberi nemashoko aanotaura. vachitaura kumusangano webato ravo mu kwekwe mukuperwa kwesvondo, Va Tsvangirai vakati hurumende yemubatanidzwa yatadza kupedza nyaya dzemhirizhonga, uye kugadzirisa kodzero dzevanhu kuti dziremekedzwe
Mukuru wemauto, General Constantine Chiwenga, vaudza bepanhau reHerald kuti mutungamiri weMDC-T, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nevese vari kuti mauto ari kupindira munyaya dzezve matongerwe enyika, vari kutaura zvemugotsi matsuro.
VaChiwenga vakaudza Herald kuti mauto emu Zimbabwe ndeepamusoro soro uye anotevedzera bumbiro remitemo yenyika mukuita basa rawo.
Mashoko aVaChiwenga anotevera mashoko aVaTsvangirai, ekuti mauto emunyika ndiwo ari kutadzisa kuti nyika ifambire mberi nemashoko aanotaura. Vachitaura kumusangano webato ravo muKwekwe mukupera kwesvondo, VaTsvangirai vakati hurumende yemubatanidzwa yatadza kupedza nyaya dzemhirizhonga, uye kugadzirisa kodzero dzevanhu kuti dziremekedzwe, kuburikidza nezvinoitwa nevamwe muchiuto.
Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, Va Emmerson Mnangagwa, vanoti nyaya yemauto rwava rwiyo rweMDC yaVaTsvangirai uye bato ravo reZANU-PF hapana zvaringaite nenyaya yacho nekuti semaziviro avo, mauto eZimbabwe haana chaari kutadza.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Va Joy Mabenge, avo vanonoshanda mubazi re Democracy and Governance musangano re Institute for a Democratic Alternative for Zimbabwe, vanoti nyaya yemauto inofanira kugadziriswam kuitira kuti mauto asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.